Hetsi-panoherana Tao Phulbari Hanoherana Ny Tetikasa Fitrandrahana Arintany Manao Tafo Lanitra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Novambra 2012 8:10 GMT
Tao Phulbari, 350 km avaratra-atsinanan'i Dhaka renivohitr'i Bangladesh, tonga niaraka daholo ireo vondrom-piarahamonina samihafa mba hanandratra ny feon-dry zareo manohitra ilay tetikasa fitrandrahana arintany manao tafo lanitra. Ny 23 Novambra 2012, ireo manampahefana dia nanao amboletra nampihatra ny artikla 144 mandràra ny fivorivoriana mihoatra ny olona 4 ho ezaka fanakànana ireo fihetsiketsehana. An'aliny ireo olona nidina teny an-dalambe nankahatra ilay fandraràna ka androany 25 Nov no andro faharoa [bn] nanaovana ny fitokonana faobe tao Phulbari.
Mipetraka eo ambony tahirin'entona voajanahary sy arintany tsy hita noanoa i Bangladesh , ary tamin'ny 1997, rehefa voatily ny tahirinà arintany ananan'i Phulbari (572 mill tonne) [bn], dia voasarika taminy ny sain'ny maro. Ny tompon'ny fahazoan-dàlana amin'ny Tetikasa fitrandrahana harena an-kibon'ny tany, Asia Energy PLC, avy any UK dia nifidy ny fomba fitrandrahana mitafo lanitra, fomba iray mandoto ny fari-pitrandrahana, izay ahafahana manao fitrandrahana 80%. Ilay tetikasa, raha tafapetraka manontolo, dia haka tanàna maherin'ny 100000 ao anatin'ny faritra mirefy 59 Km² manodidina ary hamindràna toerana mponina an-jatony maro.
Tamin'ny 2006, nanomboka ny hetsi-panoherana manohitra ilay tetikasa ary olona telo no maty, maro no naratra satria notifirin'ny mptandro filaminana ilay korontana tsy hay nofehezina[bn] nataon'ireo mponina tao Phulbari. Nanelanelana ny governemanta sady nampitony ny toe-draharaha niaraka tamin'ny fampanantenana vitsivitsy izay ahitàna fanonerana ireo niharany, sy fisintonana ny fahazoan-dàlana. Nihantona ilay tetikasa rehefa niova ny fitondràna ka napetraka tao Bangladesh ny fepetra amin'ny tany miady tny ampiandohan'ny taona 2007.
Tamin'ny 2011 nivoitra fa ny Global Coal Management (GCM) Resources, izay Asia Energy tany aloha, no nanomboka resaka tamin'ny governemanta tao Bangladesh mba hiverina handinika ilay tetikasa fitrandrahana arintany mitafo lanitra. Mandritra izany, efa miverina amin'ny asa fanaony ry zareo miaraka amin'ny fanadihadiana mandritra ny roa taona ao anatiny sy manodidina ny faritra natolotra ho fitrandrahana arintany ao Phulbari.
Prabir Kumar Sarker, mpanao gazety sady bilaogera, dia manoratra [bn] ny antony mah-mitera-doza an'ilay tetikasa ho an'ny mponina any an-toerana :
Ny 22 Febroary 2012, ny London Mining Network and International Accountability Project dia nanamarika tao anaty tatitra irayfa :
Ny International Accountability project dia manana fitetezana ireo tranga izay maneho ny fivoarana farany amin'ny raharaha ao Phulbari:
Noteherin'ireo mpikatroka mafàna fo ihany koa ny zara fa fitaterana ny vaovao nataon'ireo mpampahalala vaovao mahazatra. Professor Anu Muhammad dia nitaraina [bn] tao anaty tafatafa iray tao amin'ny Unmochon.com fa na teo aza ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety nataon'ny Kaomitim-pirenena Ho Fiarovana ny Solika, Entona Harena Mineraly, Herinaratra ary Seranan-tsambo, saiky mbola tsy miraharaha hatrany ity olana ity ireo mpampahalala vaovao mahazatra.
Tohina ihany koa izy ireo tamin'ny filazana nataon'ny kaomitin'ireo manampahaizan'ny governemanta izay naminavina fa “zava-misy iainana ny toeram-pitrandrahana manao tafo lanitra”. BBC Bangla [bn] mitatitra fa ny governemanta dia vonona ny hifampiresaka amin'ireo mpanao hetsi-panoherana raha toa kosa mbola mitohy amin'ny andro faharoany ny fitokonana androany.
Ho an'ny fanampim-baovao mismisy kokoa dia vakio ity taratasy (pdf)